अशोक योगीको प्रश्न ‘लकडाउन कालोबजारी र भ्रष्टचारका लागि हो?’ – Karnalisandesh
अशोक योगीको प्रश्न ‘लकडाउन कालोबजारी र भ्रष्टचारका लागि हो?’
प्रकाशित मितिः १७ चैत्र २०७६, सोमबार १२:२० March 30, 2020
मेरो प्यारो सरकार,
तिमीलाई सन्चै छ होला। माहामारीका बेलामा मालामाल हुदैछौं भन्ने समाचार सन्दैछु। यदि समाचार सहि हुन् भने जति माउन सक्छौँ ? जे कमाउछौं कमाउ। तिमीलाई छुट भयो। यसरी कमाउ कि सामाजिक संजालमा तिम्रो प्रतिरक्षा गर्नेलाईसमेत पुग्ने गरि कमाउ। तिमीलाई जबाफदेही बन्नु छैन। मितब्ययी बन्नु छैन। नजिकै चीनमा संक्रमणबढी रहँदा मानिस मरिरहँदा मेरो प्यारो सरकारको सरकार प्रमुखलाई केही वर्ष बाँच्नलाई मृगौला फेर्नुपर्ने पहिलो प्राथमिकता बन्यो।
धन्यछ सरकार। सरकारमै भएकाले मात्रै आजीवन बाँचिरहे पुग्ने देश। जनता मरिरहँदा सहन नसकेर मन्त्रीले आत्महत्या गरेको समाचार सुन्छ कि सुन्दैन मेरो सरकारले ? लकडाउन केका लागि ? किन हो सरकार ? प्रहरीलाई सडकमा पठाएर मात्रै पुग्छ र ? पीपीई जातको हतियार खै धुन्दुकारी सरकार। श्रमिकका लागि ३ महिनाको बन्दोबस्त खै? भाडा मिनाहा गर्न अनुरोध गर्ने महान निर्णय रे ? भाडा मात्रै उठाएर खानेलाई कर छुट र राहत खै ? स्कुलको फि तिर्न नपर्ने रे ? स्कुल नै सुचारु भाको छैन नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना भाको छैन के को फि नलिनु भनेर ? के हाँसो लाग्ने निर्णय गरेको होला ? सजिलै छ हाँस्यब्यङ्ग्य सिरियल नि बन्द छन्। जे गर्दा नि भयो।
आजकाल त सुन्ने गरेको छु, संघिय सरकारको राज्यमन्त्री प्रदेशको कुनै कुनामा उसको घरमा भेट्न कतैजाँदा पनि मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्रीले एयरपोर्टमा लाइन लागेर स्वागत गर्न जानुपर्ने। अनि उसैलाई प्रमुख अतिथि मानेर मुख्यमन्त्रीले सानो अनुहार लगाएर बसिरहनु पर्ने। आजकाल त प्रदेश सरकारको के काम स्थानीय सरकारको के काम भनेर संघीय सरकारका प्रतिनिधी र सरकार नजिक भएको सान दिनेहरुले पो भन्न थाल्दैछन त रे। कुरै बुज्न गाह्रो पो भयो त ।
हे दुई तिहाईको सरकार लकडाउन के कालाबजारीका लागि हो ? शहरमा भएका जन्तालाई गाउँमा गाडीमा ठेलाठेल गरेर पठाएर महान काम गरियो रे। काठमाण्डौंमा भएका सबैलाई गाउँमा पठाउने र बोर्डरमा भएका सबैलाई गाउँमा पठाउने। त्यो पनि महान काम रे। काठमाण्डौको खुल्ला ठाउँमा तराईको फाँटमा जनताहरुलाई सुरक्षित क्वारनटाइनमा यो दुई तिहाईको सरकारले खाख्नलाई केले रोक्यो ? के ले छेक्यो सरकार ? हरेक नेता र सांसदको घरमा ५ जनालाई राख्ने हो भने गाउँका जन्तालाई कति राहत हुन्थ्यो होला सरकार।
गाउँमै पठाएर अचुक उपाय र औषधी के छ ? मेरो सरकार। जहाँ गाउमा साबुन पाईदैन चामलको दाना र दालको दाग,अनि नुन र तेल भेटाउन छोडिसक्यो के गाउँमा पठाएर के चाँही महान कार्यगर्न खोजेको हँ? अब उसो भए बिदेशमा भएका जतिलाई काठमाण्डौं भ्यालीमा उतारिदियो भने के गर्छोै ? तिमीहरुले शहरमा भएका जनतालाई गाउँमा उतार्न खोजेको जस्तै तिमीहरु बर्षोसम्म गाउँले जनताको घरमा भकारीमा र पाँडमा लुकेर बस्यौं बचाएर राखे अहिले सरकारमा छौ। गाउँका जन्तालाई शहरमै तिमीहरुसंग राखेर बचाउन सक्दैनौं ?
जबरजस्ती खाँडेर गाउँमा पठाएका मानिसहरु मरे र गाउँभरि संक्रमण फैलियो भने पहिलो ज्यानमारा तिमी नै कहलिनेछौ ।कम्तिमा ज्यानमारा कहिलिनबाट त बच्ने उपाय गरि दे सरकार। तिम्रा आशेपासे र धुपौरेहरुले भन्न सक्ने ताकत राख्दैनन् भन्ने त प्रमाणित भै सक्यो सरकार। स्थानीय सरकारलाई किन सकस दिएको संघीय सरकार ?
हे स्थानिय सरकारका प्रतिनिधीहरु, केन्द्रीय सरकारलाई भन्ने हिम्मत गर शहरमा बसेका जनता लाई गाउँमा पठाएर कृतिम अभाब सृजना गर्ने जनतालाई सकस पार्ने र शास्ती दिने काम नगरिदिन बिन्ती छ भनेर।
हे मेरो सरकार, बिपत्तको बेला महंगोमा सामान किन्नु ठिक हो भन्नुभन्दा आफ्नै प्रदेशमा केही गरि देखाउ। बजारमा मौजदातको अबस्था के छ ? कालाबजारी रोक्ने केही उपाय छ कि मेरो सरकार हे मेरो सरकार टेलिकमले म्यासेज पठाएको पठाएै छ।
जति रिचार्ज गर्यो उति नै बोनस बजारमा रिचार्ज छैन। कतिले कालोबजारीमा किनेर रिचार्ज गरि सके रिचार्ज हुँदैन। यस्तालाई कार्बाही हुन्छ कि हुँदैन मेरो सरकार ? निजी अस्पतालमा नेताहरुको लाइन लागेको हुन्थ्यो। आज तिनीहरुले बिरामी जाँच्दैनन्। तिनै राजाले बनाएको टेकु काम लागिरहेको छ। मान्छे मरि सक्छ रिपोर्ट आउँदैन। स्वास्थ्यमन्त्रीका घरका पाउना गएका छैनन कि क्या हो ? बिपत्तमा महँगो सामान खरिद गरेर तिनै मुल्यवान पाउनखुसी पार्ने धन्दा त चलिरहेको छैन ?
प्रतिपक्ष पनि सहयोगी छ। पचास लाख दिईहाल्यो जे गरे नि गर भन्यो। जनताले घर घरमा मास्क बनाएर बितरण गरिराका छैनन्। सरकारले यति पनि गर्न सक्दैन थियो र ? सरकार सेनिटाईजर आफै बनाउन सकिदैन थियो ? सरकार स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित औजार चाहिन्छ भन्ने त थाहा थियो नि ? बिदेशबाट कति जना आए रेकर्ड राख्नुपर्छ भन्ने थाहा थिएन ? गाउगाउँमा गोर्खे लौरीलगाएर प्रहरीलाई बिना सुरक्षित उपकरण किन पठाइदैछ सरकार ?
के स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी मानिस होइनन् ?तिम्रा क्याबिनेटमा त नाकमुख छापिने गरि १ मिटर दुरी बनाएर बैठक बसेको फोटो हालेका हुन्छौं ? जन्ताका लागि आबश्यक पर्देन। हिसाब किताब ईतिहासले गर्नेछ। सरकार तेरो लकडाउन मेरै लागि पुर्णत पालना गरेको छु। जब जनताको घरघरमा चुलो बल्न छोड्ने छ र सटडाउन भएर जानेछ। आजकाल तैले जे गर्दा नि सरकाले ठिक गर्यो भनेर शेयर गर्नेहरु अनि बजारमा महँगो छ त कस्को के टाउको दुख्यो भए ल्याए भैहाल्यो त भन्नेहरु नै अरिंगाल जस्तै खनिने दिनको आगमन नहोस्। जनताको जिउ धनको सुरक्षा गर्ने प्रयत्न गर दुईतिहाईको सरकार। भाषण गरेर फुई लगाउनलाई मात्रै दुईतिहाई होइन, जनतालाई उचित राहत, स्वास्थ्य उपचार, शुशाशन र कालाबजारी अन्त्यका लागि श्रमिकका लागि कम्तिमा ३ महिना खाना र छाना र स्वास्थ्य उपचारको ब्यबस्था गरेर दुईतिहाई भएको प्रमाणित गरेर देखाउने हिम्मत गर सरकार।
बिदेशीको सहयोग र जनता अनि राष्ट« सेबकको कर नेतालाई मस्ती गर्न र उडाउनलाई होइन। यस्तै बिपत्तमा जनतालाई सेवा गर्नलाई होला सरकार उट्पट्यांग कुरा गरेर अम्किने र भाग्ने छुट छैन सरकार। प्रतिपक्षदेखि सारा सरोकारवालाले सहयोग गरेको अबस्था छ। यसलाई भरपुर सदुपयोग गर मेरो सरकार।
(उही तिम्रो लकडाउनको पुर्ण पालक, कालोबजारी र महंगीको मारबाट प्रताडितको तर्फबाट गाउँले नेपाली)